Kulamo gaar gaar ah oo ka socda Garoowe ka dib dagaalkii xalay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Kulamo gaar gaar ah oo ka socda Garoowe ka dib dagaalkii xalay
Kulamo gaar gaar ah oo ka socda Garoowe ka dib dagaalkii xalay
Wararka naga soo gaarayo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in halkaasi ay ka socdaan kulamo gaar gaar ah oo looga hadlayo xiisadda soo cusboonaatay iyo sida lagu xalin karo.
Kulamada ayaa intooda badan waxay ka socdaan Madaxtooyada Puntland,kaasi oo ay leeyihiin madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo Odayaal dhaqan oo doonaya iney qaboojiyaan Xiisadda taagan ee u dhaxeyso madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Odayaasha dhaqanka ayaa doonaya iney kala dhexgalaan Labadan mas’uul oo dartooda xalay dhiig uu u daaday,islamarkaana si nabad ah ummadda loogu shaqeeyo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa doonaya inuu xilka ka qaado guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Dhoobo daareed,wuxuuna gadaal ka riixayaa 40-Xildhibaan oo mooshin ka gudbiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka,kaaso oo uu qabtay guddoomiye ku-xigeenka Koowaad ee Golaha Wakiilada Puntland.
Xiisad dagaal ayaa maanta laga dareemayaa magalaada Garoowe,waxaana xarunta Baarlamaanka oo xalay lagu dagaalamay la wareegay ciidamo daacad u ah madaxweynaha Puntland.